उखु किसान भन्छन्- 'आन्दोलन बिथोल्न थोरै पैसा दिने षड्यन्त्र भयो'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
उखु किसान भन्छन्- 'आन्दोलन बिथोल्न थोरै पैसा दिने षड्यन्त्र भयो'
'संसद् विघटन होस् जुनसुकै पार्टी फुटोस कि जुटोस् त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। हामीलाई हाम्रो पैसा दिनुपर्‍यो । हाम्रो पैसा पाएपछि हामी घर फर्कन्छौं । हामी आफ्नो परिश्रमका लागि लडिरहेका छौं ।'
पुस १०, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — अन्नपूर्ण र श्रीराम सुगर मिल्सले ११ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत उखु किसानको बक्यौता रकम दिन सुरु गरेको छ । आन्दोलनरत उखु किसानलाई घर फर्काउन उद्योग मालिकले नामको मात्रै बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको उखु किसानहरुको गुनासो छ ।
किसानको आन्दोलन बिथोल्न खातामा केही प्रतिशत रकममात्रै भुक्तानी गरिदिएको उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामश्वार्थ राय बताउँछन् । '२ लाख दिनुपर्ने छ भने २५ हजार दिइरहेको छ । यसरी पैसा दियो भने घर फर्कन्छ भनेर उद्योगपतिले खेलेको खेल हो यो,' उनले भने,'यहाँ आएको धेरैजस्तो किसानको खातामा पैसा त हालिदिएको छ, तर एकदम थोरै । घर फर्कोस् भनेर हामीलाई यो पैसा दिइएको हो । तर हामी जबसम्म पूरा रकम पाउँदैनौं तबसम्म घर फर्कँदैनौं ।'
उखुको भुक्तानी माग्दै काठमाडौं आइपुगेका संघर्ष समितका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय (दायाँबाट पहिलो) र गगनदेव राय (दायाँबाट दोस्रो) । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर
उद्योगपतिसँग मिलेर सरकारले यस किसिमको चलखेल गरेको हुनसक्ने बताउँछन् राय । 'सरकारको पनि हात हो कि यो चलखेल गराउनमा ?, यो देशमा सरकार ठूलो हो कि उद्योगपति ठूलो । मलाई के लागिरहेको छ भने केही नेतालाई उद्योगपतिले किनेको छ,' उनले भने ।
तीनदिनअघि ६७ वर्षीय गजेन्द्र प्रताप सिंहको खातामा अन्नपूर्णले ४ लाख रकम भुक्तानी गर्‍यो । उनका अनुसार अन्नपूर्णबाट उनले जम्मा पाउनुपर्ने १० लाख हो । तर चिनी मिलले अब पाँच लाख मात्रै बाँकी रहेको हिसाब देखाएपछि आफू ठगिएको बताउँछन् उनी ।
श्यामबाबु साहको खातामा पनि हालै ८२ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ अन्नपूर्णले भुक्तानी गरिदिएको छ । उनका अनुसार अन्नपूर्णबाट उनले चार वर्षको ५ लाख ८८ हजार ४ सय ९९ सय रुपैयाँ पाउनुपर्नेछ । पोहोर सालझैं किसान फकाउन मात्र उद्योगपतिले यसरी पैसा भुक्तानी गरेको उनको भनाइ छ । 'पाँच लाख पाउनुपर्नेमा के म ८२ हजार लिएर घर फर्कनु ? सरकार उद्योगपति त हामी घर जाओस् भन्ने चाहन्छ नि। पोहोर सालजस्तो घर फर्कोस् भन्ने सोच्छ । म त पूरा पैसा खातामा नआउञ्जेल आन्दोलनमै बस्छु,'बुधबार माइतीघरमा आन्दोलनरत उनले सुनाए ।
तस्बिरहरू : अनिश रेग्मी/कान्तिपुर
तीन दिनअघि बसेको वार्तामा सरकारले उद्योगपतिबाट उखु किसानको बक्यौता रकम ६५ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको विवरण प्रस्तुत गर्‍यो । यसअघि किसानले पाउनु पर्ने रकम ९० करोड रुपैयाँ दाबी गर्दै आएको थियो । अध्यक्ष राय भने उद्योगपतिले दिएको विवरणअनुरुप नै रकम भुक्तानी गर्न माग गर्छन् । 'सरकार भन्छ हामीहरुले ६५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । हामी त भन्छौं पहिला ६५ करोड हालिदिनुस् अनि अरु कुरा पछि गरौंला,' अध्यक्ष रायले भने,'हाम्रो हिसाबअनुसार त ९० करोड नै हो पाउनुपर्ने रकम । पहिला ६५ करोड देउ त्यसपछि किसानलाई घर पठाउँछौं । बाँकी कुराका लागि छलफलमा जान्छौं ।' किसानले चार वर्षदेखि नपाएको रकमको ब्याज पनि उद्योगपतिले दिनुपर्ने किसानहरुको माग छ ।
भुक्तानी सुनिश्चित नभएसम्म घर नफर्कने बताउँछन् उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र । 'भुक्तानी सुरु भयो हामी खुसी छौं । तर हामी चाहन्छौं कि भुक्तानीको सुनिश्चितता होस् । सरकारले ६५ करोड किसानलाई दिने जिम्मा लिएको छ । त्यसमध्येका कति रकम कुन किसानले कति दिनमा पाउने भनेर सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो,' उनले भन्छन्,'सरकारले कुनै समय अवधि तोकेर ६५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्‍यो । त्यति अवधिमा पैसा पाएन भने कि सरकारले दिनुपर्‍यो । कि त अवधि नाघ्नेबित्तिकै पक्राउ पूर्जी स्वत: जारी रहने गरी उद्योगपतिलाई थुनामा राखेर असुलउपर गराइदिने कानुनी व्यवस्था बनाउनु पर्‍यो ।' मिश्रका अनुसार दाबी गरेको रकमबारे भने छानबिन समिति बनाएरै अघि बढ्ने उनीहरुको योजना छ ।
देशको राजनैतिक उथलपुथलले किसान आन्दोलन छायामा परेको बताउँछन् संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम राय । राजनैतिक घटनाक्रमले किसानमा पैसा नपाउने निराशा छाएको बताउँछन् समितिका संरक्षक मिश्र । 'हामी सम्पूर्ण किसान साथीहरुलाई यो राजनैतिक घटनाक्रमले मनमा भयको वातावरण छ । आफ्नो पैसा पाउँछौं कि पाउँदैनौं भन्ने शंका छ, निराशा पनि छ । तर गत पुस १८ गते जुन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि यो राजनैतिक घटनाक्रमले फरक पार्दैन । अलि समय लाग्ला । तर हामी आशावादी छौं ।'
अध्यक्ष रामश्वार्थ थप्छन्,'संसद् विघटन होस् जुनसुकै पार्टी फुटोस कि जुटोस् त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। हामीलाई हाम्रो पैसा दिनुपर्‍यो । हाम्रो पैसा पाएपछि हामी घर फर्कन्छौं । हामी आफ्नो परिश्रमका लागि लडिरहेका छौं ।'
भुक्तानीको सुनिश्चितता भएपछि नै किसान घर फर्कने संरक्षक मिश्र बताउँछन् । 'उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधिसँग हाम्रो निरन्तर संवाद चलिरहेको छ । तर त्यो संवादमा हामीले जुन सुनिश्चिता खोजेका छौं त्यो विश्वासको वातावरण बनेको छैन,' उनले भने,'जब सम्पूर्ण रकमको भुक्तानीको सुनिश्चितता हामी गरिसक्छौं अनि हामी सम्झौता पनि गर्छौं । केही दिनका लागि घर पनि फर्कन्छौं । तर हामी सम्पूर्ण रुपमा कानुनी रुपको सुनिश्चितता खोजेका छौं ।'
कसरी काटियो ३६ रुपैँया ?
सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसमा सरकारले अनुदान दिन्छ ६५ रुपैँया २८ पैसा । किसानले ४ सय ७१ को दरले उखुको भुक्तानी पाउनुपर्छ । तर, अन्नपूर्णले ३६ रुपैँया कटाएर ४ सय ३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलको दरमा रकम भुक्तानी गर्दा आफूहरु ठगिएको किसानको गुनासो छ ।
'अरु मिलले त्यसरी गरेको छैन। तर यही अन्नपूर्णको मालिक वीरेन्द्र कनौडियाले उखुमा ३६ रुपैयाँ कटाएको छ । हामी भन्छौं हाम्रो ३६ रुपैयाँ किन काट्ने । हामीसँग उखु लिएर के आधारमा त्यतिका प्रतिशत काटेको । त्यो त हामीले पाउनु पर्‍यो नि,' अध्यक्ष राय भन्छन्,'त्यो वीरेन्द्र कनौडिया नेपाली कांग्रेसको नेता हो, अहिले कुर्सीमा बसिरहेको छ । त्यसलाई कारबाही गर्नपर्‍यो पहिला ।'
मिल मालिकले प्रतिक्विन्टल उखुमा ३६ रुपैयाँ कटाएर दिँदा आफू ठगिएको किसान गजेन्द्र प्रताप बताउँछन् । 'मिलले मलाई ४ सय ३५ को दरले ४ लाख ३८ हजार २ सय ४८ हालिदिएको छ। उसको हिसाबले मैले अब ५ लाख पाउन बाँकी छ । तर हाम्रो हिसाबमा १ सयको हिसाब गडबडी छ,' उनले भुक्तानी भएको बैंक मेसेज देखाउँदै भने,'३६ रुपैयाँ त कटायो कटायो । सरकारबाट पाएको अनुदान पनि घटाएको छ । यसरी चिनी मिलले पैसा दिएर किसानलाई ठग्ने काम गरेको छ ।'
अर्का किसान श्यामबाबु साहले पनि सरकारले तोकेको भन्दा कम दरमा उखुको भुक्तानी गर्दा आफू ठगिएको बताए । 'मेरो ७० क्विन्टलमा ७० किलो काट्नुपर्ने ठाउँमा २४ क्विन्टल उखु काटिदियो अन्नपूर्णले । मेरो २४ क्विन्टल उखुको पैसा कसले तिर्छ ?', प्रश्न गर्दै भने,'सरकारले चाह्यो भने २ घण्टामै हाम्रो पैसा दिलाउन सक्छ । म सरकारलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो सबै पैसा भुक्तानी भयो भने हामी २ घण्टामै घर जान्छु ।'
आन्दोलनरत गगगनदेव रायको खातामा भने अझै भुक्तानी भइसकेको छैन । उनी भन्छन्,'हामी सबै किसानको पैसा पूरै खातामा हालिदिनु पर्‍यो । नत्र हामी घर फर्कँदैनौं ।'
प्रकाशित : पुस १०, २०७७ ११:१०
फिल्म हल खुल्दै, सञ्चालक भन्छन्, 'क्लबदेखि रेस्टुरेन्ट चलिरहेछन्, हलमा पनि दर्शक आउलान् नि !'
पुस ९, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — ९ महिनादेखि बन्द देशभरका हल शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन् । नेपाल चलचित्र संघले पुस १० गतेबाट हल खोल्ने स्वघोषणा गरेपछि देशभरका हल सञ्चालकले हल खोल्ने तयारी सुरु गरेका हुन् ।
'हल खुल्यो है' भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि आफूहरुले तयारी सुरु गरेको बाताउँछन् क्यूएफएक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन अडिगा । 'हल चलायनमान गरौं भन्ने हिसाबले खोल्न लागेको हो । दर्शकको स्वास्थ्य सुरक्षा नै हाम्रो प्रमुख प्राथमिता हुनेछ । त्यसैले अहिले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थातिर तयारी भइरहेको छ,' उनले सुनाए ।
उनका अनुसार हलभित्र दर्शकले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने छ । ठाउँ–ठाउँमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरेका छन् । सबै हलझैं क्यूएफएक्सले पनि अनलाइन पेमेन्टलाई प्राथमिता दिने भएको छ । 'सुरक्षाका हिसाबले सो सकिएपछि हल स्यानिटाइज गर्छौं । सामाजिक दूरी कायम गर्छौं । दर्शक हेरेर कति सो चलाउने निर्धारण गर्छौं,' अडिगाले भने ।
अधिकांश हलहरुले ५० प्रतिशत दर्शक अकुपेन्सीमा हल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
वान सिनेमाजका म्यानेजर उमेशराज गिरी आफूहरु यतिखेर कर्मचारीलाई तालिम दिनमा व्यस्त रहेको बताए । 'सरसफाइको काम त निरन्तर भइरहेको छ । सामाजिक दूरी कायम कसरी गर्ने, सकेसम्म सम्पर्क नगरिकनै कसरी सेवा सुविधा दिने भनेर स्टाफलाई तालिम दिँदै छौं,' उनले भने, 'पहिला हामी दर्शकको शरीर जाँच गर्थ्यौं । अब त्यो हुँदैन । तापक्रम जाँच्ने व्यवस्था गरेका छौं । पहिला सेक्युरिटीले टिकेट जाँच गर्नुहुन्थ्यो अब दर्शक आफैले गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।'
उनका अनुसार फुडकोर्टमा बस्ने कर्मचारीले अनिवार्य ग्लब्स लगाउनुपर्ने छ । यस्तो तयारी गरिरहँदा पहिलो पटक हल खोलेको अनुभव भइरहेको उनी बताउँछन् । 'हल ओपनिङ गर्दाको जुन अनुभव हुन्छ त्यस्तै अनुभव भइरहेको छ अहिले,' उनले सुनाए ।
क्यूजका सञ्चालक सुमित मैनालीले पनि आफूहरु १० गतेबाट हल खोल्ने तयारीमा जुटेको बताए । 'हल खोल्ने तयारीमै छौं । सरसफाइ गर्दैछौं । हेरौं कस्तो हुन्छ,' उनले भने ।
चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधान हल सञ्चालकले सुरक्षा व्यवस्था अपनाएर हल खोल्ने तयारी गरेको बताउँछन् । 'पूर्वमा पनि तयारी भइरहेको छ । पश्चिममा पनि तयारी भइरहेको छ । काठमाडौंमा पनि हल खोल्ने तयारी लगभग सकिएको छ,' अध्यक्ष प्रधान भन्छन्, '९ महिनासम्म बन्द भएको सफ्टवेयर अपडेट गर्नुपर्‍यो । कर्मचारीलाई सुरक्षा मापदण्ड अनुसार चल्न तालिम दिँदैछौं । अनलाइन पेमेन्टबाट टिकट काट्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिँदैछौं ।'
उनका अनुसार अनलाइन सेवा नपुगेको क्षेत्रमा २ मिटरको दूरीमा टिकट काट्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै हल सञ्चालकले प्रत्येक दिन हल डिसइन्फेक्ट गर्नेछन् । दर्शकको ज्वरो नाप्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । हलभित्र काम गर्ने कर्मचारीले फेससिल्डदेखि ग्लब्स लगाएर काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 'हलमा पनि १० जना दर्शक प्रवेशपछि अर्को १० जनालाई प्रवेश गराउने व्यवस्था छ,' उनले भने ।
आफूहरुले हल खोल्ने स्वघोषणा गरेदेखि सरकारले केही प्रतिक्रिया नदिएको अध्यक्ष प्रधान सुनाउँछन् । भन्छन्, 'हामीलाई सरकारले केही भनेको छैन । हामी अब पछाडि फर्कदैनौं । हल खोल्छौं । ९ महिनामा हामीलाई २ अर्ब बढीको नोक्सानी भयो।'
हल खोल्ने स्वघोषणा गरे पनि हल सञ्चालकको टाउको दुखाइको एउटै विषय बनेको छ, हलमा के देखाउने ?
प्रदर्शनको तयारीमा रहेको नेपाली फिल्म अहिले नै प्रदर्शन गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । त्यसैले निर्माताले कुनै फिल्म प्रदर्शन गर्ने सोचेका छैनन् । त्यस्तै वितरकको हातमा पनि हाल नयाँ फिल्महरु छैन । यस्तो अवस्थामा पुरानै फिल्म प्रदर्शन गरेर हल खोल्ने अवस्थामा पुगेका छन् हल सञ्चालक । संघका अध्यक्ष प्रधानका अनुसार कोरोणाका कारण असर पुगेको फिल्म 'आमा' र 'सेन्टी भाइरस' पुस १० देखि हलमा पुन: प्रदर्शन हुनेछ ।
त्यससँगै चलचित्र बिकास बोर्डमा रहेको डिजिटल फिल्म प्रदर्शन गर्नेबारे पनि छलफल गरिरहेका छन् हल सञ्चालक । 'अहिले नाफा नोक्सान नहेरी यो बजारलाई चलायमान गर्नको लागि अभ्यास थालेको हो । पुरानो फिल्म चलाउछौं सुरुवातामा,'अध्यक्ष प्रधानले भने ।
डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रदर्शनमा आएको फिल्मबारे पनि वितरक र हल सञ्चालक मिलेर छलफल गर्दैछन् । वितरक गोपालकाजी कायस्थ अहिले नयाँ प्रदर्शनमा कुनै फिल्म नभएकाले पुरानै फिल्म चलाएर हल खोल्नुपर्ने बताउँछन् । 'तत्काल प्रदर्शनका लागि हलिउड बलिउड फिल्म छैन । हुन त प्रदर्शनको तयारीमा धेरै नेपाली फिल्म छन् । तर अहिले प्रदर्शन गर्दा दर्शक आउँदैनन् । हलमा दर्शक भएपछि मात्र त्यो फिल्महरु प्रदर्शनमा आउँछ,' उनले भने,'त्यसैले पुरानै फिल्म चलाउनुपर्ने हुन्छ हलवालाले ।'
दर्शक आउलान् त ?
पुरानै फिल्म हेर्न दर्शक हलसम्म आउँछन् भन्ने विश्वास छैन हल सञ्चालकलाई । चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रधान भने दर्शक नआए पनि हल खोल्ने बताउँछन् । 'दर्शक जति आए पनि हल चलाउछौं । बन्द भएको हल खोल्यो है भन्ने सन्देश दिनलाई हल खोल्ने तयारी हो अहिले,' उनले सुनाए ।
पुरानै फिल्म हेर्न दर्शक आउँदैनन् भन्ने लाग्छ क्यूएफएक्सका कार्यकारी प्रमुख अडिगालाई । भन्छन्, 'पुरानो फिल्ममा त दर्शक कहाँ आउनु । मेरो विचारमा फिल्म नयाँ नराखेसम्म दर्शक आउनु हुन्न होला ।' वितरकले नयाँ फिल्म नदिएपछि हलमा पुरानै नेपाली फिल्म प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् क्यूएफएक्स अन्तर्गतका हल पनि ।
वान सिनेमाजका म्यानेजर उमेश गिरी भने दर्शक आउनेमा आशावादी रहेछन् । 'यो क्षेत्र धेरैपछि खोलेको हो । अहिले क्लबदेखि रेस्टुरेन्ट चलिरहेको छ । पहिलाको जस्तो नचल्लाहल तर दर्शक आउनु होला भन्ने आशा गरेका छौं,' उनले भने,'हामीले हल खोलेपछि हल पनि सुरक्षित छ है भन्ने सन्देश जाने भयो दर्शकमा । त्यसपछि विस्तारै दर्शकको चहलपहल बढ्ला नि ।'
अंग्रेजी नयाँ वर्षदेखि भने नयाँ फिल्मको प्रदर्शन हुनेमा पनि आशावादी छन् हल सञ्चालक ।
प्रकाशित : पुस ९, २०७७ १५:१९